SAMULAŞကြေးပေးသွင်းမှုစတင် | RayHaber | raillynews
[09 / 02 / 2020] မြို့တော်ဝန်များသည်ရထားလမ်းစီမံကိန်းများအတွက်နိုင်ငံတော်အထောက်အပံ့ကိုတောင်းဆိုကြသည်	01 Adana
[09 / 02 / 2020] လေဆိပ်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုသည်မြူနီစီပယ်မှ ၀ န်ကြီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းသည်	06 တူရကီ
[09 / 02 / 2020] IETT တိုးမြှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေများကိုမနက်ဖြန်တွင်အကောင်အထည်ဖော်မည်။ ! ဒီမှာ Tariff အသစ်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[09 / 02 / 2020] Amasya မီးရထားလမ်းစီမံကိန်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုများစတင်ခဲ့သည်	05 Amasya
[08 / 02 / 2020] Fahrettin Altay Narlidere Metro အတွက်ယူရိုငွေသန်း ၅၀	35 Izmir
01 / 01 / 2020 55 Samsun, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, လမ်းမကြီး, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထား
Samsun Metropolitan Municipality Samsun စီမံကိန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးİmarİnşaat Yat ။ စန်း။ Tic ။ A.Ş (SAMULAŞ) သည်နှစ်သစ်ကူးဘတ်စ်ကားများနှင့်လမ်းရထားများအတွက်မျှော်လင့်ထားသည့် subscription အချိန်ဇယားကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ကျောင်းသားများသည်ပညာရေးဆမ်ကတ်အတွက်ရက် ၃၀ အသုံးပြုခနှုန်းထားကိုရက်ပေါင်း ၃၀ အသုံးပြုရန်အတွက်ဘော်ဒါဆောင် ၉၀ ကို ၅၀၊ ၁၂၅ TL သို့ ၇၅ ခု၊ boarding 30 TL ၁၀၀ နှင့် ၂၂၅ TL ပေါ်ပေါက်ရန် ၁၅၀ ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ Extra Samkart (Yellow Samkart) အတွက်အရပ်သားကြေးပေးသွင်းနှုန်းကိုရက်ပေါင်း ၃၀ အသုံးပြုရန်အတွက် TL က ၅၀ အား ၁၃၀ TL၊ ၇၅ ခုမှ TL 50၊ ပေါ်ပေါက်ရန် ၁၀၀ 90 TL၊
SAMULAŞ၏တရား ၀ င်တွစ်တာအကောင့်မှထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွင်“ ချစ်ခင်ရပါသောခရီးသည်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လစဉ်ကြေးပေးဆောင်ခြင်းအခွန်ကို ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၉၉ နှင့် ၁၉၉၉/၇၇ တွင် UKOME ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရအတည်ပြုခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိစတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ သင်၏စာရင်းပေးသွင်းခနှုန်းထားကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Samkart လျှောက်လွှာစင်တာမှသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းရောင်းဝယ်သူထံမှတင်ပို့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျောက်ငွေပေးချေမှုကိရိယာများမှလစဉ်ကြေးများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရထားလမ်းမှတ်တိုင်များတွင် တင်၍ မရပါ။ လူကြီးမင်း၏သွားလာမှုအခကြေးငွေကို tourniquets သို့မဟုတ်အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များပေါ်တွင်မသုံးမီငွေပြန်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်၏ကဒ်ကိုမည်သည့်စက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် turnstile တွင်မဆိုအကောက်ခွန်ကိုခံယူပြီးနောက်မှသာသင်ဖတ်ရှုလျှင်ပြန်အမ်းငွေကိုသင်ခံစားခွင့်မရှိပါ။ ”
သစ်ကိုအမြန်လိုင်းsamulaş 15 ဒီဇင်ဘာလ၌စတင်ပါလိမ့်မည်
အဆိုပါ CHP ခေါင်းဆောင်Kılıçdaroğluပါဝင်လာခြင်း Input နှင့်အတူတပ်မတော်ထဲတွင်ကေဘယ်လ်ကားဝန်ဆောင်မှု
ကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ Kars ရွှံ့ကို T-bar ကိုနှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကား
ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့ Gaziantep အတွက်ဒေသ၏ပထမဦးဆုံးကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို
Ilgaz အတွက် chairlift ကီလိုမီတာ 1 600 မီတာအရှည်မှာထုတ်ဖော်ပြသ
Atabar နှင်းလျှောစီးဧရိယာ chairlift သည့်စနစ်ဝန်ဆောင်မှုသို့သွားလေ၏
Arkut တောင်တန်းနှင်းလျှောစီး Center ကစတင်ခဲ့သည်
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၄ ရက်၊ နိုင်ငံတော်မီးရထားİskenderunဆိပ်ကမ်း…
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ၁၈၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက် - Sirkeci-Yedikule နှင့်Küçükçekmece-Çatalcaလိုင်း…
SAMULAŞ Subscription Tariff
ပြည်တွင်းကားများ ၀ ယ်လိုအား TOGG မှဝယ်ယူလိမ့်မည်။
MÜSİADဥက္ကPresident္ဌ Uzun၊ Duzce Bolu Gerede YHT လိုင်းသည်ထောက်ခံမှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်
လေဆိပ်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုသည်မြူနီစီပယ်မှ ၀ န်ကြီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းသည်
မြို့တော်ဝန် Tosun မှထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှဖိတ်ကြားချက်ကို
IETT တိုးမြှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေများကိုမနက်ဖြန်တွင်အကောင်အထည်ဖော်မည်။ ! ဒီမှာ Tariff အသစ်
တောင်အာဖရိကလွတ်လပ်သောပြည်နယ်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် BTSO သို့သွားရောက်ခဲ့သည်
2019 ခုနှစ်တွင်နေရာထိုင်ခင်းအဆောက်အ ဦ ၏နေရာချထားမှုနှုန်းမှာ 53,5 ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်
ယနေ့ခေတ်သမိုင်း၌ - ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်၊ ၁၈၅၇ Constanta - Boğazköy
Fahrettin Altay Narlidere Metro အတွက်ယူရိုငွေသန်း ၅၀
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတောင်တက် Imamoglu အားဖြင့်ရှင်းပြသည်
Touristic Eastern Express အီးယူသံအမတ်ကြီးများကိုကြိုဆိုပါတယ်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန - '၂၀၀၂-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းရထားမတော်တဆမှုကြောင့်လူပေါင်း ၁၆၇၈ သေဆုံးခဲ့ရသည်'
Great Istanbul ဘတ်စ်ကားဂိတ်သည်ကုန်သည်များနှင့်ပြည်သူနှစ် ဦး စလုံး၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုများကိုရရှိခဲ့သည်
တင်ဒါကြေငြာချက် - Adapazarı-Mithatpaşaဘူတာလမ်းပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ကတ်ကြေးတင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်း
10: ဖေဖော်ဝါရီလ 14 00 @ - 15: 00
11: ဖေဖော်ဝါရီလ 08 00 @ - 12: ဖေဖော်ဝါရီလ 17 00 @
တင်ဒါကြေငြာချက် - Tensioner Clamp ကိုဝယ်မည်
11: ဖေဖော်ဝါရီလ 11 00 @ - 12: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - စလစ် Lamas ကိုဝယ်မည်
12: ဖေဖော်ဝါရီလ 11 00 @ - 12: 00
ဝယ်ယူရေးအသိပေးစာ: Rostrum နှင့်သော့ခတ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူလိမ့်မည်
12: ဖေဖော်ဝါရီလ 14 30 @ - 15: 30
တင်ဒါကြေငြာချက် - Marmaray စခန်းများအားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း
13: ဖေဖော်ဝါရီလ 10 00 @ - 11: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - UIC 60 ရထားနှင့်အညီ B70 ကွန်ကရစ်အိပ်စက်ကိုဝယ်ယူလိမ့်မည်
13: ဖေဖော်ဝါရီလ 14 00 @ - 15: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - ပထမအကြိမ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနလူမှု ၀ န်ထမ်းများအတွက် TCDD အတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း
14: ဖေဖော်ဝါရီလ 14 30 @ - 15: 30
တင်ဒါကြေငြာချက် - TCDD ပထမအကြိမ်ညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနလူမှု ၀ န်ထမ်း ၀ န်ထမ်း ၀ န်ဆောင်မှုဝယ်ယူရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Halkalı အလုပ်သမားစားနပ်ရိက္ခာစင်တာ၏စားနပ်ရိက္ခာဝန်ဆောင်မှုကိုယူပါလိမ့်မည်
17: ဖေဖော်ဝါရီလ 11 00 @ - 12: 00
Rize Artvin လေဆိပ်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါရလဒ်
ကန်ထရိုက်တာ ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်ရန်တူရကီအသိအမှတ်ပြုအေဂျင်စီ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်မသန်စွမ်းမှုနှင့်အပြစ်ကျူးလွန်သူများကိုဆက်လက်စုဆောင်းမှုရလဒ်များ
Atatürkပန်းခြံ Sea Star စီမံကိန်းသည် Ordu သို့ Prestige ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်
Afyonkarahisar Castle Cable Car Project ကိုတင်ဒါရန်
ယခုနှစ်ကျင်းပမည့် Filyos ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်မှုတင်ဒါ
BTSO 2020 ပထမအကြိမ်စည်းဝေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည်
အိမ်သုံးကားများသည် Smart Device များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေလိမ့်မည်
တူရကီရဲ့မီးရထားကဏ္ဍထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကို၏အဓိကကျောရိုး
TÜDEMSAŞနှစ် ၄၀ အတွင်း ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းသွားသည်
တူရကီဆန္ဒပြချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ပံ့ပိုးကူညီ Shell က Helix
ပြည်တွင်းကားများမှထင်ရှားသောကုမ္ပဏီ ၂၅ ခု
BMW4Series တွင်ဓာတ်ပုံများပေါက်ကြား